WatchOS 6.2.5 uye tvOS 13.4.5 Beta Vhezheni Dzinowanikwa kune Vanogadzira | Ndinobva mac
WatchOS 6.2.5 uye tvOS 13.4.5 beta shanduro dzinowanikwa kune vanogadzira
Mukuwedzera kune itsva beta beta yeIOS 13.5 uye iPadOS, iyo Cupertino kambani inotangisa nyowani watchOS 6.2.5 uye tvOS 13.4.5 betas. Mune ino kesi, iko kuvandudzwa kuripo zvine chekuita neshanduro dzakapfuura zviri chaizvo padanho rinoshanda uye mumaawa ayo aya emaOSOS neTVOS ave achiwanikwa, hapana shanduko yakakosha yakawanikwa mavari.
Apple mashizha - isu tinofungidzira kwanhasi - iyo vhezheni ye macOS mu beta yevagadziri saka zvinogoneka kuti nanhasi isu tine iyi vhezheni inowanikwa yekurodha pasi. Uye hazvisi izvo kuti shanduko hombe dzinotarisirwa asi zviri pachena kuti kana vakavhura mamwe masystem anoshanda vanomisikidza iyo Mac.
Pamashanduro eIOS uye iPadOS kana vhezheni yazvino yeAPI yekuzivisa kune avo vane hutachiona neCovid-19 inoonekwa asi zvinoita sekunge vane zvimwe zvakawanda shanduko futi. Shanduro dze beta dzemwedzi uno dzichapera nekukurumidza uye Apple iri kufarira kuvhura chishandiso ichi nekukurumidza sezvinobvira kumamirioni evashandisi veiyo iPhone nePad.
PaTVOS 13.4.5 izvo zvigadziriso zvinouya nenzira yezvigadziriso zvebug uye muwatchOS 6.2.5 zvinoita sekunge irowo runyararo rukuru, hapana shanduko dzinozivikanwa munzira ipi neipi. Kambani yeCupertino haimire uye inotopa mukana wekugadzirisa kune mabheja matsva chero bedzi iwe uri mvumo yekuvandudza. Parizvino shanduro yeruzhinji beta haiwanikwe (tichiri kunyora idzi nhau) asi zvinonyanya kuitika kuti vanozopedzisira vasvika mumaawa mashoma anotevera chero pasina chinetso mushanduro dzekuvandudza.
Senguva dzose kurudziro ndeyekuti iwe ugare padivi yeaya mavhezheni evagadziri sezvo vachigona kugadzira kumwe kusapindirana nemidziyo kana maapplication aunoshandisa mazuva ese, kunyangwe chiri chokwadi kuti shanduro dzekare dzebeta dzakashanda nemazvo, zvakanakisa kumirira uye pamusoro pezvose kusaisa aya mabheta pane edu makuru zvishandiso zvekudzivirira matambudziko. Kana tikazowana chero nhau dzinonakidza mune idzi nyowani mabheji aburitswa, tichagovana nemi mose mune ino imwe nyaya kana mune imwe nyowani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » WatchOS 6.2.5 uye tvOS 13.4.5 beta shanduro dzinowanikwa kune vanogadzira
Sonos Arc, Sonos Sub uye Sonos Vashanu vava kuwanikwa